1 USD သို့ CHF ᐈ ပွောငျး $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ တွင် ဆွစ် ဖရန့်
1 USD သို့ CHF
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ 🇨🇭 ဆွစ် ဖရန့်. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 USD သို့ CHF. ဘယ်လောက်လဲ $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်? — SFr.0.9 CHF.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း CHF သို့ USD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် USD CHF သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် USD CHF သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
ပွောငျး 1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: SFr.0.900 CHF (-0.00185)-0.206%
ပြောင်းပြန်: $1.111 USD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရန် ဆွစ် ဖရန့် ခဲ့: SFr.0.971. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် အားဖြင့်ယုတ်လျော့ -0.0716 CHF (-7.37%).
50 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်100 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်150 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်200 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်250 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်500 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်2000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်4000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်8000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်1 ယူရို သို့ အီရန်ရီအော်လ်1500 ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားရီယော်လ် သို့ အီရန်ရီအော်လ်620000 ချက်ခိုရိုနာ သို့ ယူရို90000 ရုရှ ရူဘယ် သို့ အီရန်ရီအော်လ်60000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ565000 ချက်ခိုရိုနာ သို့ ယူရို700 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ထိုင်းဘတ်1 ချက်ခိုရိုနာ သို့ ယူရို39 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို